Amazon အယူခံ ၀ န်ဆောင်မှု၊ သင်၏အကောင့်ကိုယခုပြန်လည်ရယူပါ
အကောင်းဆုံး Amazon အကောင့်အယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ
e-commerce အခင်းအကျင်းမှာသိသိသာသာအပြောင်းအလဲရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့ရာတွင်အစောဆုံးစတင်ခဲ့သူများသည်မှည့်သောကုန်သွယ်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ Amazon သည်အွန်လိုင်းစျေး ၀ ယ်ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သောထိုပလက်ဖောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုစတင်ခဲ့သည် ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ် အစပိုင်းမှာစာအုပ်တွေစတင်ရောင်းခဲ့တယ်။ ပြီးတော့အခြားရောင်းသူတွေကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်။ ၎င်းသည်ကွဲပြားသောအမျိုးအစားများတွင်ကွဲပြားသောထုတ်ကုန်များရောင်းချသောသူများအတွက် open market တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည် Amazon ကိုဆန်းစစ်လျှင်၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုနှင့် ပို၍ တူသည်ဟုခံစားရလိမ့်မည်။ သူ့မှာစိတ်ကူးနိုင်သမျှ gadget သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်နီးပါးရှိသည်။ အမေဇုံဟာဘာမှမအတွက်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပလက်ဖောင်းနှင့်ဆက်စပ်ရောင်းဝယ်သူအများစုကအောင်မြင်ခဲ့ကြသော်လည်း ဖောက်သည်ဘက်မှလူအနည်းငယ်ကသာဤအကြောင်းကိုသိကြသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်ရောင်းသူဖြစ်ပါကယှဉ်ပြိုင်မှုပမာဏကိုယခုသင်သိသည်။
ထို့အပြင်ဖြစ်ပျက်သောအရာအားလုံးနှင့်အတူအချို့သောသူများသည်အစောပိုင်းကာလမှအကျိုးကျေးဇူးများကိုရိတ်သိမ်းလိုကြသည်။ အချို့သောဖောက်သည်များသည် platform ကိုအမြတ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးအချိန် နည်း၍ ရောင်းအားပိုမိုလိုချင်ကြသည်။ ဒါကြောင့် Amazon ကသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေသာမကရောင်းသူတွေအပေါ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်ခဲ့တယ်။ သို့သော်အရည်အသွေးကောင်းသူများဖြစ်သောကြောင့်ရောင်းချသူဘက်မှမကြာခဏဆိုင်းငံ့ခံရသည်။ အကယ်၍ သူတို့ကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်တယ်ဒါမှမဟုတ်မလိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုခုကိုမစမ်းဘူးဆိုရင်၊ ပလက်ဖောင်းဟာသူတို့ရဲ့အကောင့်ကိုဆိုင်းငံ့ထားနိုင်တယ်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်မိမိကိုယ်ကိုအယူခံဝင်နိုင်သည်ဆိုလျှင်အမေဇုန်အယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်တိုအတွင်းမှာသင့်အကောင့်ကိုပြန်လည်အသက်ဝင်အောင်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းဟာပထမအကြိမ်မှာအများကြီးမြင့်မားလို့ပဲ။
Amazon အယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ရောင်းချသူအကောင့်ရပ်ဆိုင်းခြင်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်ယခုအောက်တွင်ဖတ်ရှုပါ။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ရန်: အမေဇုံအယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ထိရောက်မှုရှိပါသလား။
Amazon အယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုမပါဘဲကျွန်ုပ်၏ရောင်းသူအကောင့်ကိုကျွန်ုပ်ပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ပါသလား။
ဤသည်မှာ Amazon ရောင်းသူအသိုင်းအဝိုင်းတွင်မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Amazon အယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများမှာသင်နှင့်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောသူများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်လုပ်နိုင်သည်ဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ဘဲ၎င်း၏ထိရောက်မှုအကြောင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Amazon ၏အယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဒုံးပျံသိပ္ပံပညာမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ သို့သော်၊ ထိရောက်ပြီးတိကျသေချာစေရန်သင်ဂရုစိုက်သင့်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာအမေဇုံသည်အယူခံဝင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ညွှန်ကြားချက်များပေးထားပါသည်။ ပြီးတော့ခင်ဗျားလုံလုံလောက်လောက်ယုံကြည်မှုရှိရင်ဆက်လုပ်ပါ။
သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြtheနာကို ဦး စွာနားလည်ရန်သင့်အားအကြံပေးလိမ့်မည်။ တစ် ဦး ရေးသားခြင်း အမေဇုံအယူခံစာ ခက်ခဲသည်မဟုတ်သော်လည်းသင်ပြbutနာကိုနားလည်ပြီး၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သောအဖြေတစ်ခုထွက်လာရန်လိုအပ်သည်။ အကောင်းဆုံးမှာ၊ Amazon သည်ရောင်းချသူအကောင့်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်သောအခါ၎င်းတို့သည်ရောင်းချသူထံအကြောင်းကြားစာပေးပို့သည်။ ဒီအကြောင်းကြားစာမှာအကောင့်ကိုဆိုင်းငံ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖော်ပြတယ်။ နားလည်ပြီဆိုရင်ဒီပြ,နာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကို Amazon ကိုစာတစ်စောင်ရေးခိုင်းပါ။ ထို့အပြင်၊ ပြprecနာကိုသင်တိတိကျကျနားလည်ပြီးနားလည်ထားရပါမည်။ နောက်ဆုံးတော့အနည်းဆုံးတော့ထိတ်လန့်စရာမလိုပါ။
အကယ်၍ သင်သာဤအရာကို outsource လုပ်လိုပါက Amazon အယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုငှားရမ်းနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ဆိုင်းငံ့ထားချိန်တွင်နေ့စဉ်စီးပွားရေးဆုံးရှုံးနေလျှင်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်တန်ဖိုးရှိကြောင်းသင့်အားအာမခံနိုင်သည်။
Amazon Seller Account Suspension နောက်ကွယ်ကအကြောင်းရင်းများ
ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ထုတ်ကုန်တိုးများလာခြင်းနှင့်အတူ၊ လူတစ် ဦး အားဆိုင်းငံ့ထားရသည့်အကြောင်းရင်းများလည်းတိုးလာသည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရောင်းသူတွေဟာချိုးဖောက်မှုဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းတစ်နည်းထက်ပိုပါတယ်။ နှင့်အညီ, ဤမျှကြီးမားသောအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူကအချက်အနည်းငယ်ပဲထက်စာရင်းရှိသင့်ကြောင်းပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်သန်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အမေဇုန်ရောင်းသူဆိုင်းငံ့မှု၏နောက်ကွယ်တွင်အမှန်တကယ်သာမန်အကြောင်းပြချက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည်။
အကောင့်မျိုးစုံ - Amazon ၌ရောင်းသူအကောင့်အမြောက်အမြားရှိပါကသင်သည်ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။ အမေဇုံကတစ် ဦး ချင်းစီကိုရောင်းသူအကောင့်တစ်ခုပေးတယ် AI algorithm သည်သင်၏အထောက်အထားများကိုစစ်ဆေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အခြားအကောင့်နှင့်ကိုက်ညီပါကလူတစ် ဦး သည်ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားခြင်းခံရပြီး Amazon အယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုလိုအပ်နိုင်သည်။
မသင့်လျော်သောစာရင်း Amazon ၏လမ်းညွှန်ချက်များအရပလက်ဖောင်းတွင်မရောင်းနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်အချို့ရှိသည်။ ၎င်းသည်စင်ကာပူတစ်လျှောက်ရှိတိုင်းပြည်တစ်ခုချင်းအလိုက်သို့မဟုတ်အမေဇုံမှပိတ်ပင်တားမြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအိန္ဒိယတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသောကစားစရာများကိုရောင်းချခြင်းကိုတားမြစ်ထားသဖြင့်မည်သူမျှရောင်းချခွင့်မပြုပါ။ အကယ်၍ သင်သည်သူတို့ကို Amazon ၌ရောင်းလိုက်သည်ဆိုပါကသင်၏အကောင့်သည်ဆိုင်းငံ့ခြင်းအယူခံဝင်လိမ့်မည်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြော်ငြာခြင်း Amazon သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိသည့်မတူညီသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုရောင်းချခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်သူတို့၏ e-commerce ပလက်ဖောင်းကိုကြော်ငြာရန်ခွင့်မပြုပါ။ သင်ကလုပ်နေတယ်ဆိုရင် Amazon အယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုလိုအပ်လိမ့်မည်။
Inauthentic ပစ္စည်းစာရင်း: အကယ်၍ ဖောက်သည်များကသင်၏ထုတ်ကုန်အားမှန်ကန်မှုမရှိဟုစာရင်းပြုလျှင်သင်၏အကောင့်ကိုဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။ အမေဇုံမှာစစ်မှန်တယ်လို့ဆိုပေမယ့်မဟုတ်တဲ့စာရင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အကယ်၍ ဤအရာသည်သင်၏ထုတ်ကုန်နှင့်သက်ဆိုင်ပါက၎င်းကိုမရောင်းရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အကြံပေးပါလိမ့်မည်။
အတုပစ္စည်းများစာရင်း: ဒီဟာကအတုမရှိဘူး၊ အတုတွေရောင်းတာဟာတရားမဝင်ဘူး။ ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက်အမေဇုံကိုယ်တိုင်ယုံကြည်သည် အကယ်၍ သင်ကအတုဟုထင်နေသောမည်သည့်အရာကိုမဆိုရောင်းချနေသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်သောလိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုရယူပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိမှီအထိရောင်းလိုက်ရုံပါပဲ။
ဘေးကင်းရေးတိုင်တန်းချက်များ: အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစည်းမျဉ်းများနှင့်ပတ်သက်လာသောအခါအမေဇုံဟာအလွန်အရေးကြီးသည် အကယ်၍ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသည်မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမဆိုချိုးဖောက်ပါက၎င်းကိုသင်သေချာအောင်စစ်ဆေးပါ (သို့) ရောင်းချခြင်းကိုရပ်တန့်ပါစေ။
ကန့်သတ်ထားသောပုံများ: ကန့်သတ်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတယ်။ သင်ပလက်ဖောင်းနှင့်မသင့်တော်သောပုံတစ်ပုံကိုတင်ထားလျှင်၎င်းကိုဖယ်ရှားပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ၏ထုတ်ကုန်၏ပုံကိုအသုံးပြုရန်လည်းခွင့်မပြုပါ။ ဤသည်ရောင်းသူရပ်ဆိုင်းမှုနောက်ကွယ်မှအသုံးအများဆုံးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောမေးမြန်းချက်များသည်ဤဖြစ်ရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ရောင်းချသူများကခွင့်ပြုချက်မရသည့်ပုံများသုံးလေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်ဤအရာကိုလုပ်ဆောင်ပါကရပ်တန့်ပါကဆိုလိုသည်မှာသင်သည် IP ပေါ်လစီများကိုဖောက်ဖျက်ပြီး Amazon အယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုလိုအပ်လိမ့်မည်။
အသုံးပြုပြီးသားပစ္စည်းရောင်းသည်: အမေဇုံသည်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများကိုရောင်းချခွင့်ပြုသော်လည်းပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောအမျိုးအစားတွင်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများကိုအသစ်တစ်ခုအဖြစ်ရောင်းနေလျှင်ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုမကောင်းခြင်းသည်သင့်အားဆိုင်းငံ့ခြင်း၏အထွon်အထိပ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။ ဤအရာကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးသင်ရောင်းသမျှအားလုံးသည်လေပြေတစ်ခုအဖြစ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
ကုန်ဆုံးသောပစ္စည်းများ: အမေဇုံသည်လည်းပျက်စီးနိုင်သောပစ္စည်းများ၏နေရာဖြစ်သည်။ အမေဇုံကိုများသောအားဖြင့် gadget များမှလူသိများသော်လည်းအခြားထုတ်ကုန်များစွာကိုလည်းရောင်းချသည်။ အကယ်၍ သင်ကုန်သွားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုရောင်းနေရင်၎င်းသည်အနီရောင်အလံကြီးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ပို့ဆောင်နေသောထုတ်ကုန်များကိုစစ်ဆေးရမည်။ Amazon ကိုတရား ၀ င်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်ဆက်ဆံရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ပြန်လည်နေရာချထားရန်ဖြစ်နိုင်သည်သို့သော်ထိုသို့သောလုပ်ဆောင်မှုများသည်အမေဇုံအယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်လည်းခက်ခဲစေသည်။
ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းရောင်းမထားသောပစ္စည်း - ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်သည် ပို၍ ကြီးမားသောပြissueနာဖြစ်သည်။ နားလည်ရခက်တဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုတိုက်ထုတ်ရမယ်။ ပလက်ဖောင်းက၎င်းကိုအလွန်မထီမဲ့မြင်ပြုသည့်အခါဖြတ်လမ်းများရှာရန်မလိုပါ။ ရောင်းသူအတော်များများကထုတ်ကုန်၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုသူတို့ဖြစ်သင့်သည်ထက်ပိုမိုချဲ့ကားပြောဆိုကြသည်။ သငျသညျအဘို့အအနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်ကိုရနေတယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်လုံးဝသင်၏အမှားဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြချက်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုမှန်ကန်ဆုံးနှင့်မှန်ကန်သောနည်းဖြင့်ပြသရန်ရည်ရွယ်သည်။ ပြီးတော့ယုံပါ၊ ဒါဟာစင်မြင့်ပေါ်မှာချောချောမွေ့မွေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိဖို့နည်းလမ်းပါ။ ထို့ကြောင့်၊ သင်အမေဇုန်အယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုကိုငှားရမ်းရန်ဆန္ဒမပြုခဲ့ပါက၎င်းကိုအကုန်အကျများစွာရှောင်ရှားပါ။
အဆင့်မြင့်ချို့ယွင်းချက်နှုန်း - ODR or Order Defect Rate ဆိုသည်မှာသင်ပို့ပေးသောချွတ်ယွင်းချက်များ၏ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စင်မြင့်၏မျက်လုံးများတွင်ပြင်းထန်သောပြစ်မှုဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ Amazon သည် ODR ကို ၁% ထက်မပိုအောင်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်ချွတ်ယွင်းသောထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ မကျေနပ်ချက်ရှိပါကအချိန်မတိုင်မီပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ။
မြင့်မားသောအနုတ်လက္ခဏာဖောက်သည်အတွေ့အကြုံ (NCX): ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်သင်၏ဖောက်သည်များအားသင်ပေးသောဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစား၏ထင်ဟပ်ပြသမှုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်မကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုတသမတ်တည်းပြုလုပ်နေပါကကုန်ပစ္စည်းသည်မှားယွင်းနေသည်။ ဤအရာသည်သင့်အားဖြစ်ပျက်လျှင်ချက်ချင်းအရေးယူပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ Amazon အယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်တွေကိုလည်းအဲဒီလိုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ သင်၏ရောင်းသူအကောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းထက်ရောင်းနေသောအရာကိုပြောင်းလဲရန်လွယ်ကူသည်။
ဒါကြောင့်ဒီဟာရောင်းသူရဲ့ဆိုင်းငံ့မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာအသုံးများတဲ့အကြောင်းပြချက်အချို့ပါ။ သင်၏အကောင့်သည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုဖောက်ဖျက်သည်ဟုသံသယရှိလျှင်၎င်းကို ASAP စစ်ဆေးပါ။ အကြောင်းရင်းများစွာကြောင့်အကောင့်တစ်ခုကိုဆိုင်းငံ့ထားသည့်အခါများရှိတတ်သည်။ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲသော်လည်းသင်၏စာရင်းစစ်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစေ့စပ်သေချာစေရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ပါ၊ အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်သင့်အားသပိတ်မှောက်နိုင်သည်။ အရင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အချို့နှင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးသင်နှင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင့်အားမည်သို့ကူညီနိုင်သနည်း။
Amazon အယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုအကြောင်းပြောသောအခါအယူခံစာသည်၎င်းတွင်အဓိကအခန်းကဏ္မှပါဝင်သည်။ Amazon အယူခံစာသည်မင်းနှင့် Amazon တို့အကြားတစ် ဦး တည်းသောဆက်သွယ်ရေးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့မရောက်ခဲ့လျှင်အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်၊ ဤအရာသည်လူများစွာအဘယ့်ကြောင့်ဖြစ်သည် Amazon အယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုကိုငှားရမ်းပါမရ။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်၏ပထမဆုံးအကောင့်ကိုပြန်လည်ရယူရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဒါဟာအချိန်အများကြီးယူနိုင်ပြီးမင်းရဲ့စီးပွားရေးတွေအများကြီးကိုဆုံးရှုံးသွားစေနိုင်တယ်။
အခုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်မံပြောမယ်ဆိုရင် Amazon အယူခံဝင်စာကအဓိကပန်းကန်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဓိကကျတဲ့အရာက Plan of Action ပဲ။ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုသည် Amazon မှတင်ပြသောပြnotifiedနာကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သင့်သောမှန်ကန်သောအဆင့်များဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဂရုပြုသည့်အရာအချို့ရှိသည်။
လက်တလောပြtheနာနှင့်သင်၏အကောင့်ချိုးဖောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းသောအကြံဥာဏ်ရယူပါ။
ဒါဟာဒီထက်အများကြီးပိုမိုပီပီဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သူတို့အားခြေလှမ်းများအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်ပြန်လည်နေရာချထားမှုတိုင်းသည်ထူးခြားသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ကိုကွဲပြားစွာအာရုံစိုက်ရန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများသည်မည်သည့်တောင်းဆိုချက်ကိုမဆိုကိုင်တွယ်ရန်အမြဲလွယ်ကူစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Amazon Suspension Appeal Services ကိုစူးစမ်းပါ
စုံစမ်းမှုတစ်ခုအတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးနောက်အမေဇုံအယူခံဝင်စာကိုရေးသည်။ ၎င်းသည်အခြားမည်သည့်စာနှင့်မဆိုအနည်းငယ်ကွာခြားသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာတတ်နိုင်သလောက်အနည်းဆုံးသာပြောရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့၎င်းရဲ့ထိပ်မှာနည်းနည်းတည်ဆောက်ထားပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာသောအလေ့အကျင့်အချို့မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
တိကျသောနှင့်တိကျသော: အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း“ စကားနည်းနည်းဖြင့်ပိုမိုပြောပါ” ။ အမေဇုံနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရရှိသောအယူခံဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာရာကိုအလွယ်ဆုံးနည်းဖြင့်ဖော်ပြရန်အရေးကြီးသည်။ ပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်ကိုအလွယ်တကူဖတ်နိုင်အောင်တိုတိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ။
လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ယခုအချိန်တွင်၎င်းကိုမှန်ကန်စွာရှင်းပြရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ စာကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရာတွင်ထိရောက်မှုရှိစေရန်ကျည်ဆံအမှတ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ထိုအထိပ်၏ထိပ်ပေါ်မှာရှိသမျှသောအချက်များငါတို့အဘယ်သို့သွားမည်ကိုခြေလှမ်းများ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အရိပ်အမြွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံ: ရေးသားထားသောအကြောင်းအရာတိုင်းသည်ဇာတ်ကြောင်းပါသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကဇာတ်ကြောင်းအရေးကြီးသောကြောင့်ဤသည်ကိုပြောနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာအားလုံးကိုစနစ်တကျဖော်ပြရန်နှင့်ပြeachနာတစ်ခုစီကိုမည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကိုရှင်းပြပြီးတစ်ခုချင်းစီကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်သည်။
အသံသြဇါ: စာ၏သေံကိုစစ်ဆေးရန်အရေးကြီးသည်။ Amazon မှာရောင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်။ ဤအတွေးကိုဆက်ထိန်းထားရန်၊ အက္ခရာတစ်ခုလုံးဆောက်လုပ်သည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်ရေရှည်တွင်ရောင်းသူများအတွက်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ရိုးသား။ ကြိုးစားအားထုတ်နေသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသင့်ဘဝကိုမှန်ကန်စွာနေထိုင်နိုင်ရန်ကြိုးစားလျှင်၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းသင်နားလည်လိမ့်မည်။
အမေဇုံအယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အယူခံဝင်မှုတည်ဆောက်ခြင်းကိုအလွန်အလေးအနက်ထားသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကတာ ၀ န်တွေထဲကတစ်ခုပါ။
အချိန်နှင့်အတူတိကျတဲ့မရှိပါ။ တိုင်းပြန်လည်ထည့်သွင်းမတိုင်မီဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သဘောမျိုးအတွက်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အယူခံဝင်စာများသည် ၂၄ နာရီအတွင်းအကောင့်များကိုပြန်လည်အသုံးပြုသည့်အချိန်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အကယ်၍ ဖောက်သည်တစ် ဦး ကကျွန်ုပ်တို့ဆီသို့လာပြီးပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းအတွက်စာတစ်စောင်ကြိုးစားနေသည်ဆိုလျှင်ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းသည်အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။ Amazon ရဲ့အယူခံဝင်မှုတွေနဲ့အတူပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်စွဲဆောင်မှုက Amazon ရဲ့အယူခံဝင်စာကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကိုယ်တိုင်အတွက်လုံလောက်ကြောင်းသေချာစေပါ။
တ ဦး တည်းဒီလိုလုပ်နိုင်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုမှာတစ်ခုချင်းစီနှင့်အရာအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဒုတိယတစ်ခုက Amazon ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုငှားရမ်းခြင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆိုင်းငံ့ခြင်းကာကွယ်မှုကိုပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများစွာရှိသည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းတာ ၀ န်များစွာကိုကိုင်တွယ်ရန်မှာအခက်အခဲရှိနိုင်သည်မှာသေချာသည်။ ဤသည်ရောင်းသူဤမျှလောက်များစွာသောရောင်းသူအမေဇုံအယူခံန်ဆောင်မှု၎င်းတို့၏ရောင်းသူအကောင့်ကျန်းမာရေး၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု outsource အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည် Amazon အယူခံ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေနေသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရောင်းချသူရပ်ဆိုင်းခြင်းကာကွယ်ခြင်း၊ ပုံမှန်အကောင့်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းကဲ့သို့ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်စိတ်ဝင်စားပါကအခမဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်း.